Lesona 12 ampiharina amin'ny fananana be loatra ka hatramin'ny marketing | Martech Zone
Lesona 12 ampiharina amin'ny fananana tafahoatra ka hatramin'ny marketing
Alarobia, Aprily 13, 2016 Alarobia, Aprily 13, 2016 Douglas Karr
Ny fanatanterahana ny paikady ara-barotra lehibe dia fifandanjana marobe. Tsy misy drafitra ampy sy paikady maharitra, marketing marketing Ny ezaka dia mety manala marika. Saingy ny ezaka varotra miadana sy be fanakianana dia mety manala ny iray. Na eo aza ny afovoany dia ny fahombiazana, mitaky fifantohana mitohy amin'ny tanjona lavitra ho an'ny fikambanana, fa ny fananana loharano izay afaka manova ny lalana sy ny paikady amin'ny tena izy rehefa manomboka ny valiny.
Vao avy namaky aho Fananana henjana: Ahoana ny fitarihana sy fandresena amin'ny tombokase amerikana amerikana. Mamaky tsara ny lesona amin'ny ady sy ny fomba azo ampiharana amin'ny ezak'izy ireo isan'andro. Amin'ny maha-veteranin'ny tafika an-dranomasina ahy dia mieritreritra aho fa tsy dia mitongilana loatra amin'ny fankasitrahako ilay boky. Amin'ny maha tompona orinasa ahy dia tsy afaka nifanaraka bebe kokoa tamin'ny lesona nianarana sy ny fomba ampiharan'izy ireo amin'ny orinasako aho.
Nitsambikina tamin'ny taratasy ny tenin'ny pejy iray rehefa namaky azy ireo aho. Mikasika ireo mpanoratra ny boky dia holazaiko ireo singa manan-danja amin'ny fitarihana ary ampihariko amin'ny paikadin'ny varotra ankapobeny an'ny fikambanana:
tanjona - diniho ny iraka amin'ny marketing, ny fahafantarana ny fiantraikan'izy ireo amin'ny orinasa, ny olonao, ary ny ezaka ataonao. Fantaro ary lazao ny irakao marketing ary atsaharo ny fanjakana isaky ny fampielezana.
Resources - fantaro ny teti-bola, ny mpiasa, ny fananana, ny fitaovana, ny consultant ary ny fotoana misy isaky ny fampielezana.
Drafitra - fanapariaham-pahefana eo amin'ny fizotran'ny drafitra, hanomezana hery ireo manam-pahaizana isaky ny salantsalany na paikady handinihana izay mety ho fizotran'ny asa.
Selection - mamaritra ny fampielezan-kevitra tsara indrindra, miankina amin'ny fisafidianana ny tsotra fampielezan-kevitra sy loharanom-pahalalana mifantoka amin'izay hiantraikany lehibe indrindra.
hanome hery - manam-pahaizana momba ny varotra hamolavola ny drafitra ho an'ny fantsona voafantina sy tetika ananany fahaizana sy traikefa ananany.
Contingencies - Manaova drafitra ny amin'ny mety ho fifanandrinana isaky ny dingana amin'ny fampielezana. Ahoana no ahafahanao manatsara ny valiny rehefa tontosa ny fampielezan-kevitra? Inona ny fizotra raha sendra misy ny tsy fety?
loza - mampihena ny risika azo fehezina arak'izay azo atao. Misy dingana fanaraha-maso, fanontana, ary fankatoavana azo ampiharina hiantohana ny fanarahan-dalàna?
solontena - avelao ny manam-pahaizana hanatanteraka ny ampahany amin'ny drafitra raha toa ka afaka mijanona eo ianao ary mitarika ny fizotran'ny dingana iray manontolo. Anjaranao ny miantoka ny fisorohana ny fifandonana, ary aparitaka ny loharano mba hiantohana ny fahombiazan'ny asa fitoriana.
Monitor - manamarina hatrany ary mametraha fanontaniana momba ny drafitra manohitra ny vaovao mipoitra mba hahazoana antoka fa manohy manatanteraka izany.
Brief - mampita ny drafitra amin'ireo mpandray anjara rehetra sy ny fananana manohana, manasongadina ny fikasan'ny mpitarika.
Anontanio - mametraha fanontaniana ary miaraha mifanakalo hevitra sy mifampiresaka amin'ny tsirairay mba hahazoana antoka fa mahatakatra ny lafiny rehetra amin'ny fampielezan-kevitra tsirairay sy ny fomba fifandraisan'izy ireo.
debrief - Fakafakao ny lesona nianarana ary ampiharo amin'ny drafitra ho avy aorian'ny fampiharana izany.
Ny mahavariana dia tsy nila nanova teny be loatra aho mba hampiharana ireo lesona nianarana teny an-tsahan'ireo izay tao anaty fampielezana marketing. Amin'ny alalàn'ny dingana rehetra amin'ity dingana ity mankany amin'ny fampielezan-kevitra sy ny famoahana hevitra aorian'izany, ny fifantohana dia apetraka amin'ny fampiasana loharanom-pahombiazana amin'ny fomba mahomby, amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny fomba mahomby, ary avy eo ny fanarahana ny fampiharana ireo lesona nianarana.
Misy ihany koa ambaratongam-piangonana tsy hita maso izay tsy tokony ho tsikaritra. Raha toa izao ny fomba fitantanananao ny departemantan'ny marketing sy ny teti-bolanao, ny fampielezan-kevitra rehetra dia mifanaraka amin'ny tanjon'ny fikambanana. Gaga izahay fa be ny asa angatahinay amin'ny mpanjifanay izay tsy manao izany hampifanaraka miaraka amin'ny sanda tena izy ho an'ny fikambanana. Raha tsy manampy anao amin'ny farany ambany - ajanony ny fanaovana azy!
Tags: tompony tafahoatraJocko WillinkLeif Babinboky marketingtombo-kase an-dranomasinaFamakianamivaky toy izaotombo-kase
Wipster: Sehatra famerenana video sy fankatoavana
Torohevitra 3 momba ny varotra nomerika tsy manam-paharoa indostrialy